Lavo ny andrarezina : Nodimandry i Johnny Hallyday rehefa niady mafy tamin’ny homamiadana | NewsMada
Lavo ny andrarezina : Nodimandry i Johnny Hallyday rehefa niady mafy tamin’ny homamiadana
Ny alin’ny talata hifoha alarobia teo no nindaosin’ny fahafatesana, teo amin’ny faha-74 taony, i Jean-Philippe Clerc, fantatr’izao tontolo izao amin’ny anarana hoe Johnny Hallyday. Nitarika ny fahafatesany ny aretina homamiadan’ny avokavoka, nikiky azy efa am-bolana maro. « Tsy mampino ahy, saingy izay no mitranga… Lasa i Johnny Hallyday », hoy ny fanambaran’ny vadiny, Laeticia Hallyday, omaly alina. Hatramin’ny faram-pofonainy, niady mafy tamin’ny aretina izy, araka ny nohamafisiny hatrany. Raha tsiahivina, ny volana marsa lasa teo no nanambaran’i Johnny Hallyday ampahibemaso ny tsy fahasalamany.
Tsy nahakivy azy anefa izany. Natanja-tsaina rahateo ny lehilahy ka nanohy ny asa maha mpanakanto azy tany amin’ny trano famokarana tany. Nanomana rakikira vaovao ihany koa izy. Nanohana ara-tsaina azy tamin’izany ny vadiny, Laeticia, sy ny zanany : David Hallyday, Laura Smet, Jade sy Joy Hallyday ary ireo olona akaiky azy.
Nihombo ihany anefa ny aretiny ka, ny tapaky ny volana novambra teo, naiditra hopitaly izy noho ny tsy fahafahany miaina tsara. Enina andro ihany anefa i Johnny no notazonina tany ary nody tany amin’ny tranony, any Marnes-la-coquette, izay namboarina mihitsy ahafahana manohy ny fitsaboana azy.
Marihina fa tsy salama loatra ity mpihira malaza ity efa hatramin’ny 2009 ka fianjerana nampipitsoka ny valahany, no niandohan’izany. Taorian’io, niverina niditra hopitaly indray izy ary nodidina « hernie discale ». Niverina indray ny aretin’ny valahany, ny taona 2011 ka nitarika fandidiana indray. Herintaona taorian’izay, tratran’ny aretina « tachy­car­die » i Johnny ary nitohy tamin’ity homamiadana nandavo azy ity, izany.
Fahazazana mampalahelo …
« Teraka teny an-dalana aho », hoy ny tononkiran’i Johnny, tamin’ny taona 1969. Ny 15 jona 1943 no teraka, tany Malesherbes Paris, i Jean-Philippe Clerc. Nandao azy sy ny reniny ny rainy, Léon Smet, raha vao amam-bolana izy. Avy eo, nomen-dreniny hotezain’ny nenitoany i Johnny Hallyday.
Ny mpiahy azy, ilay mpandihy Lee Halliday, no nahatonga azy naka ny anarana hoe Johnny Hallyday. Nanosika azy hiditra teo amin’ny tontolon’ny rock’n’roll io ka nitarika ny lazany, eran’izao tontolo izao, nandritra ny 50 taona. Tsy tambo isaina ny rakikira navoakany nandritra izay fotoana izay ary maro karazana, hatramin’ny natokana ho an’ny tsena iraisam-pirenena. Eo koa ny hira ho an’ny horonantsary na « bandes originales » sy ny « albums live ».
Nitondra rivo-baovao teo amin’ny sehatry ny mozika frantsay, tamin’ny fotoan’androny, i Johnny Hallyday. Nankamamiana ny hirany, nalain-tahaka ny mombamomba azy : ny volony, ny fiankanjony, ny feony, ny ravaka nentiny, sns. Tsy vitsy ireo « sosie » na olona naka endrika mitovy amin’i Johnny Hallyday.
Marobe ireo efa naneho ny alahelony manoloana ny fahafatesan’ity andrarezin’ny mozika ity. Anisan’izany ireo mpihira namany, toa an’i Jacques Dutronc, Eddy Mitchell, Céline Dion, sns, ary ny filoha frantsay, Emmanuel Macron. Tsy vitsy koa ireo mangataka ny mba hisian’ny fisaonam-pirenena. Marihina fa tsy mba anisan’ireo i Michèle Sardou, namany hatramin’izay saingy niady taminy, hatramin’ny taona 2008.